The Irrawaddy's Blog: အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေး ပြည်တော်ပြန်နိုင်တော့မယ်
အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေး ပြည်တော်ပြန်နိုင်တော့မယ်
အမေရိကန် ပြည်တောင်စုမှာ နေထိုင်နေတဲ့အနုပညာရှင် ဒေါ်မာမာအေးကိုသမ္မတရုံးကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားနိုင် ကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားစာကို ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒေါ်မာမာအေးကလည်း မြန်မာပြည်ကို ခေတ္တ အလည်ပြန်ချင် တဲ့ အကြောင်း၊ ပြီးတော့ သူရဲ့ အနုပညာနဲ့ ပြည်သူတွေကိုလဲ ပြန်လည် ဖျော်ဖြေပေးချင်ခြင်းကြောင်း၊ အနုပညာ အသိုင်း အ၀ိုင်း ကိုလဲ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခြင်တဲ့ ဆန္ဒရှိကြောင်း စတာတွေကို BBC ကိုပြောပြသွားပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ ဗီဇာဘယ်နှစ်ရက် ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးကြောင်းနဲဒေါ်မာမာအေးက နှလုံးခွဲစိတ် ထားတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ သုံးလ တစ်ကြိမ် ပြသနေရကြောင်းဆရာဝန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုလဲ ရယူမယ်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒီကိစ္စကလည်း အနုပညာရှင်တယောက်က ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဒေါ်မာမာအေးဟာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်မရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါတဲ။ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ပြောပြစရာတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကိုလဲ ပြည်တွင်းရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပို့နိုင် မပို့နိုင်ဆိုတာတွေကိုလဲ သေချာ မသိရသေးလို့ ဒီကိစ္စကိုလည်း စီစဉ်ရမှာ ရှိသေးကြောင်းပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
Please don't forget lar show thein aung (jimmy jack). Someone help him to bring home asap.
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း သားမက်ဖြစ်သွားတဲ့ ရဲလေး နာမည်ကြီး အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ရဲလေးကတော့ သမ္မတ ရုံး ၀န်ကြီးတပါးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မင်းရဲ့ သားမက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဆိုတော် ရဲလေးနဲ့ ဇနီးသည်...
စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ မြန်မာ/ဂျာမန် မော်ဒယ်
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မော်ဒယ် လင်းလင်းရဲ့ ပုံရိပ်တချို့ကို ကြော်ငြာတချို့မှာ တွေ့ဖူးကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ သူ့မိခင်က မြန်မာပြည်က၊ ဖခင်က ဂျာမန်။...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ ဆိုင်ကြီး၊ လုပ်ငန်းကြီးတွေ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင် အဆင်ပြေနေတာဟာ မြန်မာပြည်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့ ...
ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း လွန်းမောင်ရဲ့ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ ထိုးတာ ဘယ်သူလဲ ?
၉ နှစ်တာမျှ နိုင်ငံတော် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့အဝင်တွင် ...
"အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး" - ဘလော်ဂါသစ်ထူးလွင်
အင်တာနက်သုံးတဲ့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မြန်မာပြည်သားတွေ အများဆုံးရောက်တဲ့ မြန်မာဝက်ဆိုက်က သစ်ထူးလွင် ဒေါ့ကွန် ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ လားရှိုး၊ ရန်ကုန်...